Daawo:- MD Farmaajo oo siyaasiyiinta dhigiisa ah ku dhiiragelinaya talaabo uusan isagaba qaadi karin. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDaawo:- MD Farmaajo oo siyaasiyiinta dhigiisa ah ku dhiiragelinaya talaabo uusan isagaba qaadi karin.
September 18, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Soomaliya, Wararka maanta 1
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Somalia Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay arimaha ku saabsan Tanaazulka mar uu khudbad ka jedinayay magaalada Dhuusamareb.
Madaxwayne Farmaajo ayaa ku celceliyay in Tanaazulka uu yahay geesinimo qofka uu udhashay Balse ma uusan soo hadal qaadin in isaga uu tanaazul samayn doono maadaama Culaysyo badan oo mucaaradnimo ah ay wajahday Dowladiisa.
Mareekanka oo qirtay in uu ka dambeeyay duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay duleedka Kismaayo.
Akarigii Budhley baan u galay yodhi, durdaba wuxuu ka cawdey labo arimood. Waa ta koowaade wuxuu yidhi Budhleyn beenbey noo sheegtey oo Musharadayadii ayay kasoo bixi kari la dahay. Taas horaa loo ogaa oo timirtii horeba dab wey u la’eyd.
Tan aan la yaabey baase ah markuu yidhi nimankiina Warsangeli markaad qaadhaanka ururineysaan waxaad ku yaboohdaan Shan Shan iyo Toban Toban Dollar. Waar waxaasi ma idinka foqoraa? Gacan adeygbaa? Mise dan saas usii weyn beydin dhulkiina ka laheyn?